Joojinta faafista Islaamka iyo fal-celinta Muslimiinta Yurub | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka October 13, 2015	0 288 Views
Muqdisho (Himilonews) – Iyada oo toddobaadkan dunida laga dareemay cadaadis lagu hayo dunida Muslimka ah gaar ahaan Muslimiinta reer Galbeedka–halkaas oo ol’ole ballaaran oo loogu magac daray “WORLD says NO to ISLAM,” oo macnaheedu yahay Dunidu waxay Maya leedahay ISLAAMKA, dadyowga aan Muslimiinta ahayn ee fikradaha sirgaxan kasoo garoocday warbaahinnada reer Galbeedka, waxay ku aroorayaan fiira-yaridooda.
Taniyo markii kooxda la baxday Daacish ay la wareegtay dhulalka Shaam gaar ahaan Ciraaq, dunida waxaa loo sawiray dhinaca togan ee diinta–iyada oo lagu cabbirayo falalka ay kooxdaasi ku leyso kuna waajahdo dadyowga iyo dalalka aan Islaamka aheyn. Inyar kadib, waxaa bilowday qulqulka qaxooti u badan Muslimiin kuwaas oo kasoo barakacaya dalalka Muslimiinta. Isu-geynta labadani, shacbiyadda gaalada waxaa ku adkaatay inay islaamka ku eegaan aragti quman–oo ay ka maleeyaan wax ka fiican waxa laga sheegayo.
Gubista Masaajidda iyo Islaam-naceybku waxay noqdeen labada fal-celis ee laga muujiyay sida aan loola dhacsaneyn Muslim iyo wxii la halmaala.
Ra’iisul wasaaraha Ingiriiska wuxuu sheegay in la dhimi doono Islaam-naceybka. Waxaase uu farta ku goday in loo baahan yahay in wada-shaqeyn joogto ah lala yeesho qeybaha kala duwan ee bulshada Islaamka ee ku nool UK.
Faalladiisa waxaa daba-socday goodis uu u diray dugsiyada Islaamka ah ee ku yaal UK–kuwaas oo uu u tilmaamay inay akhlaaqda quman ee dad-la-dhaqanka ah caruurta baraan. Haddii kale, wuxuu sheegay in la xiri doono dugsiyda Madrasadaha ah. Hadalka Cameron waxaa ka muuqda cabsi uu ka muujinayo in caruurta Muslimiinta ah ee ku nool UK lagu ababiyo gaalo-naceyb iyo inay xagjirro noqdaan.
Si hadaba loo muujiyo dadaal u dhigma dabuubta David Cameron, Muslimiinta reer Yurub waxay tilmaamayaan inay hab-la-dhaqan suuban ku qaabili doonaan dhamaan cid walba–xittaa kuwa soo weerara–juhdi lagu doonayo in lagu dhaliyo xiriir fayow iyo xurmo ay kuwada noolaadaan dadka ku nool Yurub–iyada oo laga tirayo madmadowga ay ka qabaan Islaamka.
Si kastaba, lama oga halka ay ku biyo shuban doonaan cadaadiska ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta. Balse in diinta loo maro diihaal iyo dibindaabyo si loo xaqiijiyo kor-ahaanshaheeda waa sunno Ilaahay ku manneysto Muslimiinta nool qarni kasta.
Previous: Markuu dhibanuhu dhulkiisa doorto!
Next: Hindiya: Markuu gabowga 60-Jirka uu gabar 6-Jir ah guursado
La kulan – Ragga doonaya inay bisha Ramadaan sameeyaan Samafal jireed.